The Cumulonimbus | Netwọk Mgbasa Ozi
Ikwusi nyocha anyị banyere ụdị igwe ojii dị iche iche Anyị lebara anya na ihe ndị kasị dị ịrịba ama na-akpali igwe ojii, anyị na-ezo aka Cumulonimbus, ụdị nke abụọ nke igwe ojii mepụtara n'ụzọ kwụ ọtọ, ọ bụ ezie na ọ bụ n'eziokwu ọ bụ nsonaazụ ụyọkọ nwere nnukwu mmepe.
Dabere na WMO a kọwara ya dị ka igwe ojii dị egwu ma dị egwu, yana a bukwanu vetikal mmepe, n'ụdị ugwu ma ọ bụ nnukwu ụlọ elu. Akụkụ, ma ọ dịkarịa ala nke elu ya, na-adịkarị mma, na-acha ọkụ ma ọ bụ na-acha ọkụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe ọ bụla; akụkụ a na-agbatịkarị n'ụdị anvil ma ọ bụ nnukwu ahịhịa. N'okpuru ebe gbara ọchịchịrị, obere igwe ojii na mmiri ma ọ bụ mmiri ozuzo na-apụta.
Dị ka anyị kwuru, Cumulonimbus bụ nzọụkwụ mmepe na-esote, na ịrị elu ọnụ ọgụgụ nke convection, na Cumulus Congestus, ya mere, ha bụ igwe ojii nke nnukwu mmepe (isi na-adịkarị n'etiti 8 na 14 kilomita elu). Na latitude anyị ha na-esitekarị na mmiri na ọkọchị na ọnọdụ ndị na-adịghị agbanwe agbanwe.
Ihe mejupụtara ha bụ ụmụ irighiri mmiri na kristal ice n’elu ma ọ bụ anvil. N'ime ha nwekwara nnukwu mmiri ozuzo, snowflakes, ice granulated, akụ mmiri ígwé na n'ọnọdụ nke enweghị ike toonụ nke buru ibu.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha na-emepụta mgbe niile oké ifufe, nke ahụ bụ, ọdịda dị n'ụdị mmiri ozuzo, mmiri ozuzo ma ọ bụ akụ mmiri ígwé, n'ozuzu ha, ọ bụ ezie na ha na-enwekwa oyi n'oge oyi, na-esoro ifufe dị egwu na mmiri eletrik nke na-ada n'agbata igwe ojii ma ọ bụ n'etiti igwe ojii na ala (àmụmà).
Cumulonimbus bụ eze nke igwe ojii, kacha ese foto na ndị kasị akpali akpali. Ha na-enyefe onwe ha ka a kọwapụta ha n'ọnọdụ ọ bụla ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịnwe ike ịse ha na usoro oke ifufe. Ghara inwe mgbagwoju anya na Cumulus congestus ebe ọ bụ na Cumulonimbus toro ogologo, ha na-eweta usoro ihe owuwu dị n'elu.
Ha na-ewetara umu abuo abuo (Calvus na Capillatus) ma ha adighi adi iche.
Ozi ndị ọzọ - Ihe Nchịkọta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Umulọ Cumulonimbus
Ihe puru iche nke Suns ato